ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ လုပ်သားများ: October 2007
ရင်ငြိမ်းပန်း ကရုဏာ ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံ စမွတ်စခွန် ခရိုင်၊ မဟာချိုင်ဒေသတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကြသော ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာ အလုပ်သမား ဆယ့်သုံးသိန်းတို့ရဲ့ လူမှုရေး အခက်အခဲ ပြသနာများကို စေတနာ အဓိကထား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အသင်းအဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ ရင်ငြိမ်းပန်း ဘလော့တွင် လည်း အသင်းရဲ့ ရပ်တည်ချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဓာတ်ပုံ သာဓကများနဲ့ တကွ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ နာရေး၊ သာရေး ကိစများကိုသာ လက်မလည်အောင် ကူညီနေရသော ရင်ငြိမ်းပန်း အသင်းတွင် မည့်သည့် နိုင်ငံရေး အရိပ်အရောင်မျှ မပါဖူးပါ။
သို့ရာတွင် ဇူလိုင်လ ၇ရက်နေ့တွင် မွန်မိန်းကလေးတစ်ဦးကို မာဖီးယားဂိုဏ်းတဂိုဏ်းက မုဒိမ်းကျင့် ဖမ်းဆီး ခဲ့ရာတွင် ထို မိန်းကလေးက အသက်ကိုမငဲ့ဘဲ ထွက်ပြေးလာနိုင်ခဲ့သဖြင့် ထို ဂိုဏ်းက မြန်မာနဲ့ မွန် မိန်းကလေး များ လက်ရှိတွင်ပင် အယောက် ၂၀ခန့်ကို ဖမ်းဆီး မုဒိမ်းကျင့် စိတ်ကြွဆေး ကျွေးပြီး ပင်လယ်တွင်း ငါးဖမ်း စက်လှေ များတွင် လှေသားများ ပျော်ပါးရန် ရောင်းစားနေသော အမှု ပေါ်သွားခဲ့ပါသည်။ ထို အမှုတွင် မဟာချိုင် ရပ်မှ ဒေသခံရဲပါ ပါဝင် ပတ်သက် နေပြီး အမှု ဖျောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရာ ကျန်ရှိနေ သေးသော မိန်းကလေး အ ယောက် ၂၀ကို ကယ်တင်နိုင်ရန် ထို အမှုကိုလည်း ရင်ငြိမ်းပန်း အသင်းမှ ရဲချုပ်ထံ ထိရောက်အောင် ထိုမှတဆင့် အန်ဂျီအိုများထိ ပေါက်ရောက်အောင် ဦးဆောင် တိုင်တန်း အမှုမှန် ပေါ် အောင် ဖော်ခဲ့ရပါသည်။ ထို မိန်းကလေး အယောက်၂၀ကို ကိစ္စဖျောက် အပြတ်ရှင်း သတ်ဖြတ်မည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် မီဒီယာများမှ မဖော်ထုတ်ရန် တောင်း ပန် ခဲ့ရပါသေးသည်။ ထိုအချိန်တွင်း အမှုတွင် ပါဝင် လှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးရဲ့ အိမ်ကို ဖောက်ထွင်း ခိုးယူခံရယုံ သာမက ဖုန်းခိုးယူသွားသဖြင့် ထိုဖုန်းကို ဆက်ကြည့် ရာ ယူတော့ဘာဖြစ်သေးလဲ ဟုပင် မောက်မာစွာ ပြောဆိုခံ ခဲ့ရပြီး အသင်းဝင်တစ်ဦးရဲ့ ချွေးမ အသတ်ခံ ခဲ့ရပါသည်။
သို့သော် ထိုအချက်ကို အငြိုးထားသော ဒေသခံရဲများသည် ရင်ငြိမ်းပန်းအသင်းကို ချောက်တွန်းရန် စောင့် နေခဲ့ကြပါသည်။ ယခုလို သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ နီးနေချိန်တွင် ခါတိုင်းနှစ်များကဲ့သို့ သီတင်းကျွတ် လ ပြည့် အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့အတွက် ဘာသာရေး အခမ်းအနား ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေချိန်တွင် ၂၀၀၇ခု အောက်တိုဘာ ၈ရက် မနက် အစောတွင် ရင်ငြိမ်းပန်း ရုံးခန်းကို ရှာဖွေရေး ၀ရမ်း မပါဘဲ ၀င်ရောက် စီးနင်း ရှာဖွေပြီး နံရံတွင် ချိတ် ဆွဲ ထားရှိသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပုံပါ ရုပ်ပုံ ကားချပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သွေးစည်း ညီညွတ်ကြဖို့ မိန့်ခွန်းနှင့် ဘာသာရေး အခမ်းအနားတွင် ဝေငှရန် အသင့် ပြုလုပ် ထားသော သာသနာ့ အလံပါ ရင်ထိုးတံဆိပ်တို့ကို သိမ်းယူပြီး အသင်း ဥက္တဌကိုပါ နိုင်ငံရေး ပုဒ်မဖြင့် ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွား ခဲ့ကြပါသည်။
ဒီဘလော့လာ ပရိသတ်ကို မေးချင်ပါသည်။
အာရှသူရဲကောင်းအဖြစ် တကမ္ဘာလုံးက လေးစားအသိအမှတ်ပြုသော မိမိနိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပုံကို အခန်းနံရံမှာ ချိတ်ဆွဲတာဟာ နိုင်ငံရေး မြောက်ပါသလား။
သီတင်းကျွတ် လ ပြည့် အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့အတွက် ဘာသာရေး အခမ်းအနားတွင် ဝေငှရန် ပြုလုပ်ထားသော သာသနာ့အလံပုံ ရင်ထိုးသည် နိုင်ငံရေးမှု မြောက်ပါသလား
ဘယ်သောအခါကမှ နိုင်ငံရေး အငွေ့အသက်ပင် မပါအောင် (မလှည့်အားအောင်ပင် ကိုယ့်အလုပ် တဖက်၊ နာရေး ကူညီမှု တဖက် လုပ်ကိုင်နေရသော အသင်းဝင် အင်အား ၂၀၀ဖြင့် လူဆယ့်သုံးသိန်းကို) ကူညီနေ ရသော ဒီရင်ငြိမ်းပန်း အသင်းကို ဘာကြောင့် မြန်မာအစိုးရ မျက်နှာတော်ရအောင် ထိုင်းအစိုးရက ဘာကြောင့် ထိုးကျွေးချင်ရသနည်း
ထိုမျှ မကသေးဘဲ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက် ပြန်လွှတ်ပေးစေလိုလျှင် အထက်ကို အမှုတွဲ မတင်စေ ချင်လျှင် ဘတ်ငွေ နှစ်သောင်း ပေးရမည်ဟု ငွေညှစ်ပြီး ငွေပေးမည့်သူ များလာသောအခါ လန့်ဖျပ်ပြီး အ ထက်ကို အမှုတွဲ
တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ရှာဖွေရေး ၀ရမ်းမပါဘဲ ဖမ်းသောကြောင့် မသက်ဆိုင်သော အခြား သက်သေခံ ပစ္စည်းအတု များကိုပါ ထည့်သွင်းခွင့် ရှိနေကြောင်းလဲ ခြိမ်းခြောက်
ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုမှ တဖန် အထက်သို့ အမှုတွဲ ရောက်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် အရေးယူမှု လုပ်မှ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အပေါ့စား အရေးယူမှု ဖြစ်စေရန်အတွက် လက်ရှိ ရှိနေသော
အလုပ်သမားကဒ်ကို ပြန်သိမ်းပြီး အလုပ်သမား လက်မှတ် မရှိသူအဖြစ် နယ်စပ်သို့ ပြန်ပို့မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နယ်စပ်ရောက်မှ အချိန်မရွေး ပြန်ခိုးဝင်လာ နိုင်ကြောင်း၊ ဒေသခံရဲများ အနေဖြင့် ပြန်ခိုးဝင်လာသည်ကို နားလည်မှုဖြင့် မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သွေးဆောင် ဖြားယောင်းကာ အမှုတွဲကို ဆက်မလိုက်စေဘဲ ကြေအေးရန် သွေးဆောင် ဖြားယောင်းခဲ့ကြပါသည်။ သို့ရာတွင် အမှုတွဲကို အမှန်တကယ် ဖွင့်ရုံမက ပင်မ တရားရုံးတွင်ပါ အမှုတွဲကို တင်လိုက်ပြီး သေးသည့် အမှုကို ကြီးအောင် ဖန်တီး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံသားများ ခင်ဗျား.. ရင်ငြိမ်းပန်း အသင်း ဥက္တဌ အဖမ်းခံရခြင်းသည် လူ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အားလုံးကို ကြက်ကလေး ငှက်ကလေးကို ဖမ်းသလို ဥပဒေမဲ့ ဥပဒေကို လက်တလုံးခြား ထင်ရာစိုင်း လုပ်ချင်ရာ လုပ်ကာ လူသားချင်း မစာနာမှု ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူများက ကမ္ဘာ့အလယ်တွင်
မြန်မာနိုင်ငံကို တရားဝင် ကန့်ကွက် စာ ပို့နေသော်လည်း အောက်ပိုင်းတွင်မူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ရုံးခန်းတွင်း ချိတ်ဆွဲမှု ကြောင့် နိုင်ငံရေး ပုဒ်မတပ်ကာ ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒကို ထင်ဟပ်လျက် ရှိနေ ပါသည်။
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ ခင်ဗျား.. ကိုယ့်ပြည်တွင်း ကိုယ်နေသော်ငြား မတရားဖိနှိပ်ခံရ၊ နိုင်ငံရပ်ခြား ထွက်လာပါသော်ငြား မတရား ဖိနှိပ် ထိုးကျွေးခံနေရသော အမိမြေမှ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင် နှမ အောက်ခြေ လူတန်းစား သန်းနဲ့ချီသော
မြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့ ခံစားချက် နဲ့ ဘ၀ဒုက္ခများကို လူသားချင်း စာနာကြပါရန်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ မြန်မာလူမျိုးများ ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် မျက်နှာမဖော်ရဲ လောက်အောင် လူသားတန်ဖိုး လူသား ဂုဏ်သိက္ခာများ လွန်မင်းစွာ ကျဆင်းနေရခြင်းမှ လွတ်မြောက်ရန် အတတ်နိုင်ဆုံး ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးစား အကောင်အထည် ဖော်ကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား..
Posted by ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ လုပ်သားများ at 10:54 PM 11 comments:
Posted by ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ လုပ်သားများ at 10:37 PM 1 comment:
၇ရက်ဇူလိုင် ၂၀၀၇ မနက်၃နာရီမှာ ပင်လယ်စာ စက်ရုံမှ အချိန်ပို အလုပ် ဆင်းပြီး အတူတူ ပြန်လာတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေး ၅ယောက်ကို ဒေသခံ ရဲကပါ မနိုင်လို့ လက်လျှော့ထားရတဲ့ ထိုင်းမာဖီယား ဂိုဏ်းဝင် ၁၀ ယောက်က လိုက်လံ ဖမ်းဆီး ရာမှာ ၄ယောက်ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် သွားပြီး အလုပ်သမားလက်မှတ် တရားဝင် လက်ဝယ် ရှိသူ အသက် ၂၂နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ယောက် အဖမ်းခံ ခဲ့ရပါတယ်။ သူမကို ဖမ်း မိရာ လယ်ကွင်း ထဲမှာပင် အဓမပြုကျင့် ခဲ့ကြပြီး နောက် သူတို့ဂိုဏ်း တည်ရှိရာ တိုက်သို့ ခေါ်ဆောင် သွားကာ ကျန်ဂိုဏ်သား လေးယောက် က ထပ်မံ စော်ကားကြပြန်သည်။ သူမသည် ၈ရက် ဇူလိုင်တွင် အားကုန် ကြိုးစားပြီး ၄ထပ်တိုက်ပေါ်မှ ခုန်ချပြီး ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် လာခဲ့ရာ မဟာချိုင် ခရိုင်ရှိ ဇီဝိချိုင်ဆေးရုံတွင် တက်ရောက် ဆေးကုသ ခံနေခဲ့ ရသည်။ သူမကို ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်ခဲ့ရာ တိုက် ခန်း တွင် မိန်းကလေး အယောက် ၂၀ ခန့်လည်း ဖမ်းဆီးခံ ထားရ ကြောင်း၊ သူမအဖမ်းခံ ထားရ ချိန် တိုတောင်း သောကြောင့်
ထိုမိန်းကလေးများ မည်သည့်လူမျိုးများ ဖြစ်သည်ကို မသိခဲ့သော်လည်း အ များစု မှာ မွန်နှင့် မြန်မာမ လေးများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုမိန်းကလေးများ အားလုံးကို အ၀တ်ဆင် မပေး ထား ကြောင်း၊ ထိုမိန်းကလေးများနှင့် သူမကို လိင်စိတ်ကြွဆေးများ အတင်း တိုက်ကျွေးပြီး လူမဆန်စွာ အနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြောင်း၊
အနိုင်ကျင့်ရင်းလည်း နင်တို့ ခွေးမတွေ ငါတို့က နင်တို့ မွန်နဲ့ မြန်မာတွေကို ခွေးလောက်ပဲ သဘောထားတယ် စသည်ဖြင့် ရိုင်းစိုင်းလွန်းစွာ ပြောဆို ကြိမ်းမောင်း ခဲ့ကြောင်း၊ နင် တို့ကို လေ့ကျင့်ပေးပြီးရင် လှေတွေဆီ ရောင်းစားမှာ ဟုလည်း ပြောခဲ့သေးကြောင်း ရဲသို့အကြောင်း ကြား ခဲ့သော်လည်း မည်သည့် အရေးယူမှုမှ မပြုလုပ် ခဲ့ကြောင်း သတင်းကြား သိရပါသည်။
မဟာချိုင်ဒေသသည် ပင်လယ်စာ ထုပ်ပိုးပြင်ဆင်သော စက်ရုံများ ထွန်း ကား ပြီး စက်ရုံပိုင်ရှင် သူဌေး များသည် ကိုယ်ပိုင် ငါးဖမ်း စက်လှေ များလည်း ရှိလေ့ရှိကြပြီး ငါးခိုးဖမ်းလှေလည်း များစွာ ပိုင်ဆိုင် လေ့ရှိကြ သည်။ ထပ်မံ စုံစမ်းချက်များအရ ထိုမိန်းကလေးများကို ပင်လယ်တွင်း ငါးဖမ်းစက်လှေ များ တွင် လှေသားများ ပိုမို အလုပ်လုပ် ချင်စေရန် ပျော်ပါးရန် အပြီး ရောင်းစား ပေးလေ့ ရှိပြီး ထို လှေ သား များကလည်း စိတ်တိုင်းကျ
ပျော်ပါးပြီးသောအခါ ၀န်ဆောင်မှု မပေးနိုင် တော့သော ထို မိန်းက လေး များကို ကိစ္စ လက်စဖျောက် ပင်လယ်တွင်း ပစ်ချခဲ့ လေ့ရှိ ကြောင်း၊ အဆိုပါ လူမဆန် သော အကြမ်းဖက် လူ ကုန်ကူးမှု တွင် ထိုင်း ရဲများ ကိုယ်တိုင် တရားမ၀င် ပါဝင် ပတ်သက် နေကြောင်း သိရှိ ရသဖြင့် မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ပြီး ထိုကိစ္စများကို အဓိကထား ကူညီသော Pavena foundation သို့ အကြောင်းကြားခြင်း၊ ထိုင်းစစ်
ထောက်လှမ်းရေးသို့ တိုင်ကြားခြင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန သို့ တိုင်ကြားခြင်း၊ ထိုင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ရဲဌာနသို့ တိုင်ကြားခြင်း အစရှိသည် တို့ကို ဆက် တိုက် ဆောင်ရွက်ရာ အရေးယူမှု စတင်ခဲ့ပါသည်။ လူဆိုးများ ထွက်မပြေး နိုင်ရန်
ထိုမာဖီးယားဂိုဏ်း တည်ရှိရာ ဌာနချုပ်ကို ရဲများက ၀န်းရံထား နေ စဉ် ဘီဘီစီ သတင်း ဌာနမှ သတင်း ကြေညာ ခဲ့သဖြင့် ဓားစာခံ ထိုမိန်းက လေး များ၏ အသက် အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရမှု အတွက်ရော၊ မာဖီးယား ဂိုဏ်း ချုပ်နဲ့ ဂိုဏ်းသားများကို ထွက်ပြေးခွင့် ရအောင် သတင်းပေးသလို ဖြစ်ခဲ့ သည့် အတွက် ကြောင့်ပါ သက်ဆိုင် ရာ လှုပ်ရှားသူများ က အလွန်စိတ် ဆိုး နေခဲ့ကြ ပါသည်။
ထို့ပြင် နာမည်သာလိုချင်ပြီး ခေါင်းရှောင်တတ်သော တာဝန်ရှိသူများ ကြောင့် ဇူလိုင် ၁၃ရက် ထိ ထို မာဖီးယား ဂိုဏ်းကို သူစီးနိုး ငါစီးနိုး နှင့် ၀င်မဖမ်းရဲဘဲ ဖြစ်နေရာ မနေနိုင်သော မြန်မာအချို့ကြောင့် ဂိုဏ်းဝင် ၃ယောက်ကို လိုက်လံဖမ်းဆီးရာ ထို၃ယောက်ကို ဒေသခံရဲတစ်ဦး၏ နေ အိမ်ဟောင်းအတွင်း တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ထိုအရေးကို လိုက်လံဖော်ထုတ် ကူညီသူ မြန်မာတစ်ဦး၏ နေအိမ်ကိုဖောက်ထွင်း ခံခဲ့ရပြီး နောက်တစ်ဦး၏ ချွေးမဖြစ်သူ အသတ်ခံခဲ့ရပါသည်။
ဖောက်ထွင်းသူသည် တအိမ်လုံး အ ပြောင် သိမ်းသွားရာ လက်ကိုင်ဖုန်းပါ ပါသွားပြီး ထိုလက်ကိုင်ဖုန်း နံပါတ် ကို ဆက်သွယ်ရာတွင် ဖောက်တာငါပဲ.. ဘာလုပ်ချင်လဲ.. ဘာဖြစ်ချင်လဲ စသည်ဖြင့် ပြန်လှန် ခြိမ်းခြောက် သွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ဆက်ကြေးငွေ ပေးထားသောကြောင့် ဖမ်းရိုးမရှိသော နယ်တွင် လက် မှတ် မရှိဘဲ တရားမ၀င်အလုပ်လုပ်သူများကို ဖမ်းသည် ဟုဆိုကာ အိမ်ခန်းများအတွင်း ဓာတ်ငွေ့သုံး ပြီး အတင်းဖမ်းဆီးမှုကို ထူးခြား တိုက်ဆိုင် စွာ ပထမဆုံး ဖမ်းဆီးမှု ပြုခဲ့ရာ တမင် လက်စားချေ ဖမ်းဆီးခြင်းဟု မြန်မာများက သတ်မှတ် အခဲမကြေ ဖြစ်နေကြပါသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်သူများက နောက်ဆုံး ကြိုးစားသည့် အနေဖြင့် Pavena foundation သို့ဆက်သွယ်တိုင်ကြားခဲ့ရာ ထိုအသင်း မှ တည်ထောင်သူ ကိုယ်တိုင် ထိုင်းရဲချုပ်သို့ တိုက်ရိုက်စာတင်အရေးယူမှု ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် တိုင်ကြားသူ မြန်မာမိန်းကလေး ကိုလည်း အန္တရာယ် ကင်းစေရန် ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ပေးထားခြင်းများ ပြု လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအသင်းရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကြောင့် နောက်ထပ် မာဖီးယား ဂိုဏ်းသား ၄ ယောက်ကို
ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း နောက်ထပ်လည်း လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုများကို ထိထိရောက်ရောက် ပြုလုပ်ပေးနေကြောင်း ရုပ်မြင်သံ ကြား မှ ထုတ်လွှင့်ကြေညာခဲ့ရာ သတင်းကြားသိရသဖြင့် ပါဗီးနား အသင်းကြီးကို လွန်စွာ ကျေးဇူး တင်ဖွယ်ရှိလေသည်။
သို့သော် စေ့စပ်သေချာလိုသူ မြန်မာပညာတတ် အလုပ်သမားများက ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ဆက်လက် စုံစမ်းရာ ထိုအဖမ်းခံထားရသော ၄ယောက်မှာ ထိုးကျွေးခံ ဘာအဆင့်မှ မရှိသော သူများဖြစ်ပြီး ထို မာဖီးယားဂိုဏ်းတွင် အမှန်တကယ်
ထိပ်ပိုင်းမှ လူများမှာ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ထိုဒေသရှိထိပ်တန်းအာဏာပိုင် များ ဖြစ်နေပြီး ထိုဂိုဏ်းသည် အတော်ကို အင်အားကြီးမား သည်ကို တွေ့၇လေသည်။ ထိုမျှမကသေး ဘဲ မိန်းကလေးတစ်ဦး ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် ခဲ့ရာ တိုက်ခန်းတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သူ မိန်းကလေး ၂၀ ယောက် မှာ လုံးဝ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီး ကျန် မာဖီးယားဂိုဏ်း သားများ ကိုလည်း ရှာမတွေ့တော့ပေ။ ဖမ်းမိသူ ၄ယောက်မှလည်း သူတို့လေးယောက်သာ
ထိုမိန်းကလေးကို ဖမ်းသည်ဟု ၀န်ခံပြီး အမှုမှန် ကို ကွယ်ဝှက် သေးသိမ်စေခဲ့သည်။ လာမည့် ဇူလိုင် ၁၄ရက်နေ့တွင် အဆိုပါ လေးယောက်ကို ရုံးထုတ်မည် ဖြစ်ရာ ထိုင်းများ၏ ကူညီမှုသည် နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ရန် သက်သက်သာ ဖြစ်ပြီး အမှုမှန်ကို သေးသိမ် ကွယ်ဝှက် သလို ဖြစ်နေခဲ့လေသည်။ ပင်လယ်စာ လုပ်ငန်းသည် ထိုင်း နိုင်ငံ၏ အဓိက နိုင်ငံခြားပို့ကုန် ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန်ကို ဒေါ်လာ သန်းထောင်ချီ ထောက်ပံ့နေသော လုပ်ငန်းဖြစ်ရာ ထို
လုပ်ငန်းအတွက် မြန်မာမိန်းကလေးများကို သည်လို လူမဆန် လွန်းစွာ အသုံးချပြီး လှေသမားများကို ပျော်တော် ဆက်စေပြီး သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က တိုင်ကြားမှုကို ဂရုမပြုဘဲ သည်လို မသိချင် ဟန်ဆောင်ကာ ဖုံးဖိမှုကို ကန့်ကွက်သည့် အနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူများကို တွန်းအား ပေးရန် အတွက် သက်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ များ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ လည်းကောင်း
မြန်မာ့လူမျိုးရေးကို စိတ်ဝင်စား စာနာသော ပြည်ပရောက် မြန်မာများမှလည်းကောင်း online petition များကို ပြင်ဆင်ကန့်ကွက် တွန်းအားပေး တောင်းဆို ပေးကြပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
Posted by ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ လုပ်သားများ at 9:50 PM 20 comments:
သည်တစ်ခေါက် ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာများရဲ့ သတင်းကို ရင်နင့်စွာနဲ့ ကြေညာပါမယ်။
ဆူခိုထိုင်းခေတ်၊ ပထမ အယုဒ္ဓခေတ်၊ ဒုတိယ အယုဒ္ဓခေတ် နဲ့ အခု လက်ရှိ ချကရီခေတ်လို့ ခေတ်တွေရှိရာမှာ လက်ရှိခေတ်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ မင်းဆက် ခေတ်များဟာ မြန်မာကြောင့် ချည့် ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ သူတို့ သမိုင်းက ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခုလက်ရှိ မင်းဆက်က ထိုင်းအမျိုးသား တစ်ရပ်လုံးကို မြန်မာလက်က ကယ်တင်ထားခဲ့တယ်၊
လက်ရှိမင်းဆက်က မင်းများဟာ သေလွန်ပြီး တာတောင် နတ်အဖြစ်နဲ့ ထိုင်းများကို မြန်မာများ မထိပါးနိုင်အောင် ဆက်လက် စောင့်ရှောက်နေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ ၀ါဒဖြန့်သလို ထိုင်းများကလည်း ယုံကြည်ကြပါတယ်။ သည်နည်းနဲ့ လက်ရှိမင်းဆက်ဟာ တိုင်းပြည်အာဏာကို တရားဝင် မပိုင်ဆိုင် ပေမယ့် လူထုရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ ပိုင်ဆိုင်ထား ခဲ့ပါတယ်။ သည်အချက် ပိုမိုခိုင်မြဲ လာအောင် ဘာဂလာချန်ရွာကို မြန်မာတပ် ၀င်စီးစဉ်က ရက်စက်ပုံကို ရုပ်ရှင် ရိုက်ပြပြီး မြန်မာများ မျက်မှန်း တန်းမိနေတဲ့ ကျွဲရိုင်းအချိုရည် ပင်တိုင်ကြော်ငြာသူ ဘက်ပြောင်း ကွန်မြူနစ် ဟောင်း၊ အမျိုးသားရေး ၀ါဒီ ခါရာဘောင် (ုံဗျွဗဗြဥ) ကလည်း ဘာဂလာချန်သီချင်းကို ပြောင်မြောက် စွာ သီဆိုပြီး မြန်မာ မုန်းတီးရေးကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ သည်သီချင်းဟာ မြန်မာပြည်မှာ အဆိုတော် ဗဒင်ရဲ့ သီချင်းလို နေရာတိုင်းမှာ ပျံ့လွင့်နေခဲ့ပါတယ်။ သည်နှစ်ထဲမှာတော့ မြန်မာ မုန်းတီးရေး လှုပ်ရှားမှုကို ပိုမိုအရှိန်မြှင့်လာခဲ့ပြီး ဆုပန်ကလျာနဲ့ နရဲစွမ် ၃ကားတွဲကို ရုပ်ရှင်များ ထပ်မံရိုက်ကူး ပြသခဲ့ ပါတယ်။ သည်လို လုပ်ရပ်များကြောင့် ထိုင်းမှာ မြန်မာများဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်ကထက် ပိုမို ဖိနှိပ်ခံ လာခဲ့ကြရပြီး သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်များကတော မွန်နဲ့ မြန်မာမလေး များကို အကြမ်း ဖက် ဖမ်းဆီးကာ ရောင်းစားခံရသော ဖြစ်ရပ်များ ပိုမိုများပြား လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာ မလေးများ အကြောင်း တိုက်ဆိုင် ခဲ့လျှင် ဆက်သွယ်နိုင်အောင် အသင်း၏ လိပ်စာကို အောက်ပါအတိုင်း မှတ်သားထားနိုင်လေသည်။
1047 - 51 Pon Luang ComplexSoi AmpornPhan 12, Moo 7Phaholythin Road, Klong Tanon, BangKhenBangkok 10220
Phone: (66)2 972-5489
(66)2 972 5490
နောက်သတင်း တစ်ရပ်ကတော့ မြန်မာ ကလေးများနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာ အလုပ်သမားများဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်းကို မှတ်ပုံတင်မရှိ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မပါဘဲ နာမည်ရင်း၊ နေရပ်လိပ်စာ အရင်းကိုတောင် မပြောကြဘဲ နောက်ကြောင်းပျောက် လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကြရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ စမွတ်စခွန် ခရိုင်ရှိ မဟာချိုင်သည် ပင်လယ်စာ လုပ်ငန်း စက်ရုံများ ဖွံ့ဖြိုးပြီး ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာလုပ်သား တစ်သန်း နှစ်သိန်းခွဲခန့် အလုပ် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသော ဒေသဖြစ်ပါသည်။ ထိုအလုပ် သမားများသည် သရီးဒီ ခေါ် Dirty. Difficult and Danger ဟူသောအခြေအနေ တွင် အလုပ် လုပ်ကိုင် နေကြရပြီး သူတို့ဧ။် သားသမီး ရင်သွေးငယ် များမှာ အတိဒုက္ခ ရောက်လျက် ရှိနေကြ ပါသည်။ ကလေးမိခင်မှာ ကလေးကို စောင့်ရှောက် မည့်သူမရှိ၊ ကလေးထိန်း ကျောင်းလခလည်း မတတ်နိုင် သည့်အတွက် ကိုယ်တိုင် ကလေးထိန်းပါက အလုပ်မလုပ် နိုင်သဖြင့် စားဝတ် နေရေး ကြပ်တည်းခြင်း စသဖြင့် အခက်အခဲ များစွာကို ရင်ဆိုင်နေ ကြရရှာပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့၏ ကလေးများကို ရရာ လူကြုံဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့သည့် အချိန်တွင် လမ်းတွင် ကလေးငယ်များ သေပျောက်မှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ အချို့မှာ ကမ္ဘာမီးလောင် သားတောင် ချနင်း ဆိုသည့်အတိုင်း မတတ်သာ လွန်းသောကြောင့် မိဘမဲ့ ကလေး အရေအတွက် တိုးလာသည်ကို ရင်နင့်စဖွယ် တွေ့လာရပါသည်။ ထိုကလေးငယ် များသည် စာရင်း မ၀င် လူရာမ၀င်ဘဲ ကြီးပြင်းလာလျှင် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် အန္တရာယ်လေးများ ဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်မိ ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အခမဲ့ ရင်ခွင်ပိုက် ကလေးကျောင်း ကို ထိုကလေးငယ် များအတွက် ရင်ငြိမ်းပန်း ဖောင်ဒေးရှင်းမှ စီစဉ်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုဒေသမှ ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ လုပ်သား များဧ။် သားသမီးများကို ကူညီ ကယ်တင် စောင့်ရှောက် ရန် အတွက် အလှူငွေများ ထည့်ဝင် လှူဒါန်း နိုင်ကြ ပါသည်။
Mr. Kyaw LwinPresidentYin Nyein Pann FoundationNadee road, Moo 4, Mahachai, Samutsakhon, ThailandPh: (66) 0874142527email: yinnyeinpannfoundation@gmail.com
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိကာ တရားမ၀င် အလုပ်လုပ်နေကြရသော မြန်မာ အလုပ်သမားများ ဖြစ်လင့် ကစား သူတပါး တိုင်းပြည်တွင် ရှိလျက် မိမိတို့ မွေးဇာတိ မြန်မာပြည်ကို မမေ့သောအားဖြင့် မြန်မာ့ ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးစံများနဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုများကို မပျောက်ပျက်စေဘဲ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း နေထိုင် ရင်း ကျန်ခဲ့သောဧပြီလ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို မြန်မာ့ရိုးရာမပျက် ယဉ်ကျေးစွာ မြန်မာမှုမြန်မာ့ဟန် အပြည့်ဖြင့် ဆင်နွဲခဲ့သော မဟာချိုင်ရပ်ရှိ မြန်မာများကွှိွုှုဠ ရုပ်မြင်သံကြားမှပင် လာရောက် ရိုက်ကူး မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရပါသည်။
ရင်ငြိမ်းပန်းအသင်းကြီးမှ သင်္ကြန်တွင်း ၃ရက် တရားစခန်းကို မည်သူမဆို လာရောက် တရားအားထုတ်နိုင်ရန် ကမကထ ပြုပေးခဲ့ပါသည်။ စုပေါင်းတရားစခန်းကို နေရာအတွက် ထိုင်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ကို ခွင့်တောင်းပြီး တရားပြဆရာတော်အဖြစ် ချမ်းမြေ့ ရိပ်သာ ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာကျောင်းခွဲ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးနန္ဒ၀ံသမှ ရှင်းလင်းညွှန်ပြပေးခဲ့ပါသည်။ မထင်မှတ်ထားစွာ ယောဂီလောင်း တရာကျော် လာရောက် စာရင်းပေးသွင်းခဲ့ကြပြီး (၁၁၂)ယောက် တရားအားထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခုလည်း ၀ါဆိုခါနီးအချိန်တွင် ရက်သတ္တ တပတ်လျှင် တစ်ရက်တည်းသော အလုပ်ပိတ်ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ဓမ္မစကြာသုတ် ရွတ်ဖတ်နည်းနှင့် ဓမ္မစကြာ တရားတော်သင်တန်းကို ဦးဆောင်စီစဉ်လျက် ယခု လာမည့် ဇူလိုင် ၂၉ရက် တွင် ကျရောက်သော ဒုတိယ၀ါဆိုလပြည့်နေ့တွင် ဓမ္မစကြာသုတ် ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ပွဲကို ထပ်မံ ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းပါးအပ်ပါသည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ ရေနံသူဌေးများ စုဝေးရာ ကာတာနိုင်ငံတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့လျက်ရှိရာ လိုအပ်သော လုပ်သားများကို မြန်မာနိုင်ငံမှ လုပ်သားပွဲစား ကုမ္ပဏီများနှင့် ဆက်သွယ်ခေါ်ယူခဲ့ကြရာ ကျေးလက်အချို့တွင် ရွာလုံးကျွတ် လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြသူများ ရှိကြောင်း၊ ထိုသူတို့သည် လယ်ရောင်းနွားရောင်းပြီး ပွဲခပေးကာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရအောင် ကြိုးစားခဲ့ကြကြောင်း၊ သို့သော် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုံးကိုရော နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားဈေးကွက်မှ မိမိရသင့်ရထိုက်သော လခနှုံးထားကိုပါ မသိဘဲ စာချုပ်ပါ လခဖြင့် ၁နှစ်၊ ၂နှစ် စာချုပ်များ ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ကာတာသို့ရောက်သော်
နေထိုင်စားသောက်မှုစရိတ်နှင့် လခ မည်သို့မျှ မလောက်ငသည်ကို လည်းကောင်း၊ မိမိတို့ကို ကုမ္ပဏီမှ လခတိုးပေးသော်လည်း စာချုပ်အရ လခမှာ မိမိတို့ထံရောက်မလာဘဲ ပွဲစားကုမ္ပဏီသို့သာ ရောက်ရှိသွားသည်ကို လည်းကောင်း သိရှိရလေသည်။ ထို့ကြောင့် မခံချင်ဖြစ်မှုနှင့် ပင်ပန်းပြီး အကျိုးမရှိမှုတို့ကြောင့် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လိုလှသော်လည်း လာစရိတ် အကြွေးမကျေခြင်း ကြောင့် ကြိတ်မှိတ်ကာ စိတ်ဆင်းရဲ လူဆင်းရဲ ခံစားနေကြရကြောင်း သိရှိရလေသည်။
ထိုအလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခလစာများကို တပတ်တခါ ရှင်းခြင်း၊ ၁၅ရက်တစ်ကြိမ် ရှင်းပေးခြင်း၊ နှင့် တလတကြိမ် ရှင်းခြင်း တို့ကို ကုမ္ပဏီအလိုက် ပြုလေရာ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား မြန်မာနိုင်ငံသား ငွေလွှဲသမားများ တော်တော် အလုပ်ဖြစ်လေသည်။ သို့သော် မေလမှ စတင်ကာ ပြည့်ဖြိုးအောင် ကုမ္ပဏီသည် ကာတာတွင် လာရောက်အခြေစိုက်ပြီး ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို ပါဝင်ဆင်နွဲလာခဲ့သည်။ ရန်ကုန်ပေါက်ဈေး တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁၁၆၅ကျပ်ရှိရာ ယင်းတို့က ၁၁၉၀ကျပ် ပေးပြီး ဒေါ်လာဝယ်သည့်အပြင် ငွေလွှဲပြီး သက်ဆိုင်ရာ အိမ်များ သို့ ငွေရောက်မရောက် ဖုန်းဆက်ရာတွင် ဖုန်းခ အလွန်ဈေးကြီးသည့် နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ ကုမ္ပဏီမှ ငွေလွှဲသူများအတွက် အခမဲ့ဖုန်းပေးဆက်လေသည်။ ထိုအခါ မြန်မာများကြားတွင် ငွေမဲလျှော် သည်ဟု လည်းကောင်း၊ မြန်မာငွေ တန်ဖိုးကျရသည့် အကြောင်းရင်း ဟုလည်းကောင်း တီးတိုးပြောဆို ကြသော်လည်း မိသားစု ငွေပိုရရေးအတွက် ထိုကုမ္ပဏီကိုသာ အားပေးရင်း ငွေလွှဲနေရကြောင်း သတင်း ရရှိလေသည်။
Posted by ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ လုပ်သားများ at 9:27 PM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စကားအတိုင်း မြန်မာတို့ရဲ့ ဒုတိယအိမ်ဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နေရာအနှံ့အပြားမှာ ရွှေမြန်မာပေါင်း လူဦးရေ (၂)သန်းကျော် တရားဝင်ရော၊ တရားမ၀င်ပါ
ရောက်ရှိနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကြရာ အများစုနေထိုင်ကြတဲ့နေရာများနှင့် လုပ်ကိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။၁. မဲဆောက်နှင့်ဝန်းကျင် (အလုပ်မျိုးစုံနှင့်
အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း) မြန်မာ၅သိန်းခန့်၂. ဖန်ငနှင့်ဝန်းကျင် (ရေနှင့် တံငါလုပ်ငန်း) မြန်မာ၅သိန်းခန့်၃. စမွန်စခွန် (ရေနှင့် တံငါလုပ်ငန်း) မြန်မာနှစ်သိန်းခန့်၎. နခွန်ပသွန် (၀က်မွေးမြူရေးနှင့် အလုပ်မျိုးစုံ)၅. ချင်းမိုင် (အလုပ်ပေါင်းစုံ)၆. နခွန်စီသမရတ် (စိုက်ပျိုးရေး)၇. ထိုင်းတောင်ဖျားပိုင်း (ရေနှင့် တံငါလုပ်ငန်း)စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ နယ်စပ်ကခိုးဝင်လာစဉ်
အသက်ရှုကြပ်ကာလမ်းမှာသေဆုံးကြလို့လောင်စာဆီလောင်း ပြီးမီးရှို့ခံရတဲ့၊ ထိုင်းတောင်ပိုင်း မလေးရှားနယ်စပ်ကအညိုရောင်နယ်မြေမှာ လုပ်အားခငွေ ရှင်းမပေးချင်တဲ့ ယုတ်မာပက်စက်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တချို့ရဲ့ ငါးအသားလွှာစက်တွေထဲကို အရှင်လတ်လတ်ထည့်သတ်ခံရတဲ့၊ လောနှင့်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားတချို့နဲ့အတူ အလောင်း၃၀၀ကျော်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တွေ့ရတဲ့အထဲမှာ ပါဝင်သွားခဲ့တဲ့ ကံဆိုးရှာသူရွှေမြန်မာများရဲ့သတင်းကတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မထူးဆန်းတော့တဲ့သတင်းဖြစ် လာနေတာ တာဝန်ရှိသူများရဲ့ တာဝန်အပေါ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုလွဲမှားမှုကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တရားမ၀င် လာရောက်ခဲ့ကြသူများဖြစ်လို့တရားဥပဒေရဲ့အရိပ်အာဝါသကိုခိုလှုံခွင့်မရကြတဲ့၊ မတရားမှုမှန်သမျှကိုခါးစည်း ခံနေကြရရှာတဲ့၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးဆိုတာကို လူသားအရေးအဖြစ် သဘောမပေါက် ကြရှာပဲနိုင်ငံရေးအဖြစ်မြင်ကာကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုဖို့ကိုတောင်နိုင်ငံရေးသမား လို့အထင်ခံရမှာ
ကြောက်လို့မပြောရဲရှာသူမြန်မာအလုပ်သမားများရဲ့ဘ၀ဟာသူတပါးခေါင်းပုံဖြတ်တာခံရဖို့အတွက် လူလာဖြစ် နေကြရသလိုပါပဲ။
လုယက်မှုပြဿနာနှစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေကြရပါ တယ်။ မျောက်ဂိုဏ်နဲ့လမ်းသရဲဂိုဏ်းနှစ်ခုကြောင့် အလုပ်သွားရာမှာတောင် အုပ်စုနဲ့သာ သွားလာရဲတယ်လို့ ရွှေတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ စမွန်စခွန်ဟာ မူလက တံငါရွာမျှသာဖြစ်ပြီး အခုငါးကိုနိုင်ငံတကာကိုတင်ပို့ ရာ ငါးလုပ်ငန်းမြို့အဖြစ်တိုးချဲ့မှုကြောင့် မူလကြီးစိုးရာမျောက်များ
စားကျက်နဲ့နေရာပျောက်ကာ မြို့ပြင်နဲ့ နီးစပ်ရာမြေလွတ်များမှာနေထိုင်ရင်း လမ်းသွားလမ်းလာများ စားစရာကိုင်ဆောင်လာပါက အုပ်စုလိုက်ထွက် ကာ လုယက်ကြပါတယ်။ ရွှေများဟာလည်း အခန်းငှားခသက်သာရာ မြို့ပြင်များမှာ နေထိုင်မှုများတဲ့အတွက် ရွှေနဲ့မျောက်ပြဿနာတက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းသရဲဂိုဏ်းကတော့
ဆိုးသွမ်းထိုင်းလူငယ်များကမြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်ကာ ငုံ့ခံကြမယ့်ရွှေများကို အနိုင်ကျင့်လုယက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ေ>မပူရာကင်းမှောင့်ဆိုသလို
အသားထဲကလောက်ထွက်တဲ့ပြဿနာကတော့ အမှုပွဲစားဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းရဲက ဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာခံရပြီးရင် ဆက်လက်ပြီးတရားမ၀င်အလုပ်လုပ်တာ
ရွှေများအတွက်ရိုးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ပါ။ သည်လိုအခြေအနေမှာ လူသစ် သည်နယ်မြေထဲကိုဝင်လာရင်
ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းကိုမျက်နှာမထောက်၊ ထိုင်းရဲကို လက်ထောက်ချ၊ ပြီးရင် ထိုင်းရဲဆီကပွဲစားခပြန်တောင်းယူတာကိုအမှုပွဲစားလို့ခေါ်ပြီးထိုလူများကိုထိုင်းရဲကလက်သပ်မွေးထားပါတယ်။
အလုပ်လုပ်ပြီးရှာရသမျှငွေကိုအိမ်ပြန်ပို့ရာက အလုပ်ခွင်ထဲမှာထိခိုက်တဲ့အခါ ရောဂါစွဲတဲ့အခါ အလုပ်မလုပ်နိုင်ဆေးကုဖို့ငွေမကျန်ဖြစ်ကြသူများကို ၂၀၀၄ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ရင်ငြိမ်းပန်း ကရုဏာဖောင်ဒေးရှင်းက ဆေးကုသစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။ သေအံ့မူးမူးလူမမာများ
မြန်မာပြည်သို့ပြန်လိုပြီးလမ်းစရိတ်မရှိသူများ၊ မတော်တဆသေဆုံးကြသူများရဲ့ဈာပနများ၊ အလောင်းကို
မြန်မာပြည်သို့ပြန်သယ်လိုသူများအတွက်စားရိတ်များကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးကြပါသည်။မည်သည့်အသင်းအဖွဲ့ကမှ ထောက်ပံ့ကြေးမရနိုင်ကြရှာတဲ့ တရားမ၀င်အလုပ်သမားများ တစ်ရက်တစ်ဘတ်နှုံးနဲ့ တလဘတ်၃၀ ထည့်ဝင်
လှူဒါန်းငွေများကိုမတည်ပြီးတည်ထောင်ထားရတဲ့သည် အသင်းလေးကိုသာအားကိုးအားထား ပြုနေကြရရှာတဲ့ ရွှေများရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်အကူအညီပေးလိုပါက ရင်ငြိမ်းပန်းကရုဏာဖောင်ဒေးရှင်း http://yinnyeinpann-passion.blogspot.com/ ကိုဆက်သွယ်နိုင်ကြကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Posted by ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာ လုပ်သားများ at 8:57 PM No comments: